Okwukwe Ndị Kraịst - Gịnị Bụ Mgbaghara? | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Okwukwe Ndị Kraịst: gịnị bụ perdono? Agbaghara m mmehie? Maka ndị nke ọzọ n'ebe m nọ? Ezi! n'ezie ndị a bụ ajụjụ ndị anyị bụ Ndị Kraịst jụrụ onwe anyị ọtụtụ oge! Maka okwukwe Ndị Kraịst, mgbaghara bụ otu n’ime isiokwu ndị kachasị mkpa mmadụ niile ga-eche ihu na ndụ ya n'agbanyeghị okpukpe, agbụrụ, na omenala.
Anyị nwere ike ịtụlekwu okwu gbasara akọnuche nke karịrị nke ndị Kraịst. Nke mbụ, anyị ga-agba mbọ na-agbaghara ndị ọzọ. Iwe, ihe mgbu, mwute, ịkpọasị, na mmetụta ndị ọzọ e jikọtara ha na mmekọrịta nke imebi mmekọrịta na-ebibi ndụ ndị mmadụ. Jizọs na-agwa onye ọ bụla n'ime anyị ka ọ na-ele ndụ ya anya ma na-e imitateomi ọchịchọ ya ịhụ ndị mmadụ n'anya, ọbụna ndị ọ dị mkpa ka e mee ha n'okwu a.
Ya mere, enwere m ike ịgbaghara Jizọs kwuru ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịgbaghara ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ndị ọzọ emejọọ anyị, anyị ga na-echeta ihe merenụ mgbe niile. Jizọs kwuru na: chetaọ dị m mkpa ịgwọ ọrịa site na nghọta na-abịa naanị site n'ịrụ ọrụ mgbe niile ịgbaghara mmadụ: "Onye merụrụ m ahụ merụrụ m ahụ ... " N'ihi ịdị njikere anyị ịgbaghara. Ọ bụghị gbasara ịhapụ ndị mmadụ ka ha rigbuo anyị. Ma ọ bụ uche nke ọrụ N'ebe onye agbata obi anyị nọ ka Jizọs tụrụ anyị aro na Akwụkwọ Nsọ.
Okwukwe Ndị Kraịst - Gịnị Bụ Mgbaghara? Gịnị kpatara ya ji bụrụ ngwa ọrụ?
Okwukwe Ndị Kraịst - Gịnị Bụ Mgbaghara? Gịnị kpatara ya ji bụrụ ngwa ọrụ? Jesus na-eme ka anyị chebara ihe a echiche: mgbaghara bụ otu ngwá ọrụ iji mezie mmekọrịta, ọ bụghị ngwá ọrụ iji kwe ka mmekọrịta ọjọọ gaa n'ihu. Eziokwu a apụtaghị na anyị kwesịrị ịhapụ ndị na-emejọ anyị, ọkachasị ndị anyị hụrụ n'anya ma nyefee onwe anyị na ndụ anyị. Otú ọ dị, anyị kwesịrị iji nlezianya kpebie otú mgbaghara ga-esi enyere mmekọrịta ahụ aka ito eto, ọ bụghị ịka njọ. Anyị na-ebi n'etiti ọha mmadụ nke na-adịkarị njikere ikpe ikpe, ịkatọ ma kewapụ iche. Okpukpe Ndị Kraịst na-enye echiche na naanị ezi ọgwụgwọ bụ ịdị njikere ịgbaghara.